Uhlawula malini kuHlahlelo oluSimahla? | Martech Zone
Uhlawula malini kuHlahlelo oluSimahla?
NgoLwesine, Aprili 22, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
UBarbara Jones kwibhlog yeStellar Thoughts wamisela udliwanondlebe naye Iiseshoni zesicwangciso seCRM ipodcast usebenzisa iSkype. Ndichukunyiswe ngokwenene ngumgangatho weaudio (kanye ezantsi kwintaka ekhwela ngasemva endlwini yam). Sixoxe kubahlalutyi xa iyonke kunye nokuba kutheni umntu enokuthi ahlawule i kubahlalutyi Ipakethe.
IBarb inceda amashishini amancinci ngokuphunyezwa, ukuthunyelwa kunye nesicwangciso sobuchule I-imeyile kunye nolawulo lobudlelwane kubathengi (CRM) isisombululo ibizwa ngokuba yi-Infusionsoft. Khange ndizigubungele zonke izizathu kwi-podcast kodwa nazi ezimbalwa:
Eyona ihlawulwe kakhulu kubahlalutyi ababoneleli bakwanikezela ngofezekiso noqeqesho ngokunjalo. Ukuvula uhlawulelwe kubahlalutyi Iphakheji efana neWebtrends inokukunika ithuba lokufikelela kumakhulu eengxelo. KuGoogle, kuya kufuneka ungeze kwaye uguqule iiprofayili, kwaye wakhe iingxelo zakho zesiko. Akumnandi ukuba awuzange wenze olu hlobo lomsebenzi ngaphambili!
I-Google Analytics ine-lag enzulu ekubanjweni kwedatha kwaye inomda wokuba ingakanani idatha efakiweyo. Obo bubunzima obukhubazekileyo xa ufuna ukuphendula kwishishini lakho elikwi-intanethi.
Kungenxa yokuba abazami ukuqhubeka nokufuna, kuhlawulwe kubahlalutyi ababoneleli banezixhobo zokuqhubeka nokuphucula iimveliso zabo. Indawo yeWebhu, umzekelo, ukudityaniswa kweselfowuni, iFacebook kubahlalutyi Umdibaniso, imilinganiselo yemidiya yoluntu, idatha yomtyeleli kunye neseti eyomeleleyo yee-API zokutsala kunye nokutyhala idatha.
Eyona nto iphambili kukuba ngamanye amaxesha simahla iza ngendleko. nge kubahlalutyiNdiyakholelwa ukuba iindleko zibalulekile kumashishini aphakathi naphakathi anokwenza igalelo elibonakalayo kwisicwangciso sabo sokuthengisa ukuba bayakwazi ukubona amathuba emali. Ngaphandle kweempendulo abazidingayo ukuze bathathe izigqibo ezintle, bamosha nje ixesha kunye nemali ngesicelo sasimahla.
[iaudiyo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2010/04/WebAnalyticso-StellarThoughts.mp3]
tags: amaxabiso esongezo-kwinqwelo-mafuthaUphando lwezoPhandouphawu lokubekisa lwentlalo
Ayisoze yalula njengabalandeli kunye nabalandeli
Ingqungquthela yakho elandelayo kwi-Intanethi?
Epreli 22, 2010 ngo-6: 41 AM
Ndicinga ukuba izixhobo zasimahla zilungile kumashishini amancinci afuna ulwalathiso ngokubanzi kwintengiso yawo. kodwa ngokuya ikhula ifemu, ngakumbi batyale imali kwintengiso yabo, kokukhona kufanelekile ukuba babe zi-analytics